कसरी गर्भावस्था बेला endometrium
बाँझोपन र एक साधारण कारण गर्भपात को गर्भाशय को अस्तर छ जो endometrium, उल्लङ्घनको छ, menstrual चक्र समयमा परिवर्तन undergoes। त्यसैले गर्भावस्था को समयमा pathologically परिमार्जन endometrium हुन सक्छ प्रारम्भिक चरणमा गर्भपतन, साथै आरोपण प्रक्रियाको उल्लंघन। यसलाई अवधारणा अघि endometrium को परीक्षा पूरा गर्न यसैले आवश्यक छ, र आवश्यक भएमा, उपचार पूरा गर्न।
को endometrium को असामान्य विरूपण दुई समूहहरू, हर्मोन विकार र mucosa मा भडकाऊ प्रक्रिया उपस्थिति मा विभाजित थिए। यी विकार लागि कारण को श्रोणि स्थित अंगहरु मा सुनिंनु, बारम्बार abortions, एस्ट्रोजन र progesterone हर्मोन को खलबल अनुपात हो। disturbances को फलस्वरूप पुरानो endometritis, hyperplasia, विकास endometrial सानो ट्युमर, ऊतक edema, को endometrium को polyps, यो सामान्य भ्रूण विकास गर्न असम्भव हुन्छ देखि, र यसरी गर्भावस्था jeopardized हुन सक्छ।
हर्मोन प्रभाव को एक परिणाम रूपमा Endometrium महिलाहरु physiologically परिवर्तन, त्यसैले कुनै पनि हर्मोन को hyperplasia विकास गर्न पृष्ठभूमि नेतृत्व। डिम्बाशय को क्यान्सर, को pituitary र adrenal ग्रन्थीहरूको मा असामान्यताहरु, साथै कपडे को स्वागत: यो घटना को लागि कारण फरक हुन सक्छ।
यसरी, यो comprehensively राम्ररी आवश्यक भएमा रोग परिवर्तन उपचार गर्न सक्षम हुन, गर्भावस्था बेला endometrium जाँच्न आवश्यक छ। निदान endometrial बायोप्सी gistrosalpingoskopichesky, microbiological, हर्मोन र histological प्रविधी, अल्ट्रासाउंड, एन्डोस्कोपी र hysteroscopy रूपमा छानबिन यस्तो विधि पनि समावेश छ।
Gistrosalpingoskopiya यस्तो polyps वा endometrial सानो ट्युमर रूपमा रोगहरु को शङ्काको अन्तर्गत आयोजित, र यसरी गर्भावस्था जटिलताहरू विकास। पनि हो कि अल्ट्रासाउंड पत्ता लगाउन सक्षम लुकेको रोगहरु लागि uterine गुहा को एक अध्ययन सञ्चालन गर्छन्।
Endometrial histological विधि अध्ययन पुरानो endometritis, को श्लेम लाग्एको झिल्ली, hyperplasia र polyps को संक्रामक वा भाइरल घाउ उपस्थिति प्रकट गर्छ।
छैन कम साधारण निदान, यस्तो अल्ट्रासाउंड रूपमा प्रविधी जो यो menstrual चक्र बेला endometrium को परिवर्तन नियन्त्रण गर्न सम्भव बनाउँछ, जसबाट mucosal रोगहरु को विकास को प्रारम्भिक चरणमा पहिचान गर्न सक्षम।
यो uterine गुहा मा रोग प्रक्रियाहरू को पत्ता लगाउने कि उल्लेख गर्नुपर्छ, र scraping को endometrium मा थप अनुसन्धान बाहिर छ।
हामी यो कार्य र uterine mucosa को स्थिति normalizing उद्देश्य जटिल उपचार को स्थापना गर्न योगदान जस्ता गर्भावस्था बेला endometrium रूपमा सामाग्री को अध्ययन, महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भनेर भन्न सकिन्छ।
उपचार जीवाणुरोधी र immunostimulating लागूपदार्थ र औषधि, जो कार्य नारी शरीर मा रक्त र चयापचय कार्यहरु को normalization निर्देशित छ संग सामान्यतया छ; यो पनि हर्मोन उपचार दिइएको हुन सक्छ।
एक पटक बाहिर , यस endometrium को उपचार गर्भावस्था को नकारात्मक परिणाम को likelihood कम र पनि बाँझोपन जोखिम कम गर्छ।
यसरी, गर्भावस्था बेला endometrium यसको सामान्य प्रवाह को एक तत्वको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यो रोग प्रक्रियाहरू र गर्भपात को विकास को जोखिम कम गर्न अवधारणा अघि endometrium अवस्था छानबीन महत्त्वपूर्ण छ। को निदान को endometrium विकास मा कुनै पनि असामान्यताहरु प्रकट जहाँ मामला मा, यो यसको कार्य र स्थिति बहाल गर्ने उद्देश्य जटिल उपचार पूरा गर्न आवश्यक छ।
कारण र गर्भावस्था बेला गुप्तांग हड्डी को दुखाइ को उपचार।
एएफपी र hCG गर्भावस्था को निदान
गर्भावस्था मा साग: हानि वा लाभ?
अमेरिकी बच्चा को सेक्स गलत जान सक्नुहुन्छ? सुझाव र डाक्टर टिप्पणी
Benny Andersson: जीवनी र काम
कान मा संकुचन, कार्यान्वयन प्रविधि
Subculture र नस्ल: Rastaman - यो हुनुहुन्छ?
संयुक्त राष्ट्र सचिव-जनरल अन्नान कोफी: एक जीवनी, क्रियाकलाप, पुरस्कार र व्यक्तिगत जीवन
3 दिनको लागि Kefir आहार: चयन गर्न के?
Dzhubga: एक अद्भुत छुट्टी समीक्षा
दूध संग घर बिस्कुट: फोटो संग नुस्खा
को "फिल्ड" मा सकारात्मक ताला
पिस्तौल-CrossBow: लक्षण, वर्णन, फोटो
मौसमी व्यञ्जन: ओवन मा बैगुन नुस्खा